Miasa Principles of Dryair Products - Hangzhou DryAir fitsaboana Co., Ltd
1.Dehumidifying Toro lalana:
Ao amin'ny dingana famokarana, ny matoantenin'ny atao vokatry ny hamandoana eo amin'ny vokatra foana ny olana ...
Air dehumidification dia azo tanterahana vahaolana, ary mety ho tratra amin'ny alalan'ny fomba maro: Ny fomba voalohany dia hihena ny rivotra ambany ny ando hevitra sy manala ny hamandoana condensation. Izany no fomba mahomby eo ambanin'ny toe-javatra izay ny ando hevitra dia 8 - 10 Ry C na mihoatra; ny faharoa dia mitroka fomba iray ny hamandoana desiccant fitaovana. Ceramic kofehy ny impregnated porous hygroscopic mpiasa no ampiasaina ho toy ny toho-tantely-mpihazakazaka. Ny rafitra dehumidification kely saina, ary mety hahatratra -60 Ry C na latsaka amin'ny alalan'ny manokana desiccant mitambatra fitaovana. Ny fomba hihena dia mahomby ho an'ny kely na fampiharana haavon'ny toerana ny hamandoana dia somary maso; fa lehibe kokoa fampiharana, na aiza ny hamandoana haavon'ny dia tsy maintsy fehezina amin'ny ambaratonga ambany indrindra, desiccant dehumidification no takina.
DRYAIR Systems mampiasa fomba hihena ny teknolojia, ary koa ny kodiarana ny finday desiccant rafitra. Araka ny hita eo amin'ny sary, ny maotera desiccant mitarika ny kodia hanodinana ny 8 ka hatramin'ny 18 ora isan-in, ary imbetsaka mifoka hamandoana ny fahaterahana indray amin'ny alalan'ny asa, mba hanome rivotra maina. Ny desiccant kodiarana Mizara ho faritra ny hamandoana sy ny fahaterahana indray faritra; araka ny hamandoana ao amin'ny rivotra esorina ao amin'ny faritra hamandoana ny kodia, ny blower mandefa ny rivotra maina ho ao an-efi-trano. Ny kodia rehefa variana rano ary mihodinkodina ny fahaterahana indray faritra, ary avy eo dia nateraka indray rivotra (rivotra mafana) dia nampita ny fananany ny kodiarana avy any amin'ny lalana mifanohitra, namoaka ny rano, ka ny kodia dia afaka manohy ny asany.
Ny rivotra dia nateraka indray na etona mafana amin'ny heaters na heaters herinaratra. Noho ny fananana manokana ny Super silicone gel sy ny molekiolan'ny-sivana ao amin'ny desiccant kodiarana, DRYAIR dehumidifiers dia afaka mahatsapa dehumidification mitohy eo ambany be dia be rivotra boky, ka hitsena ny fepetra ambany dia ambany ny hamandoana afa-po. Amin'ny alalan'ny mifandraika sy mitambatra, ny hamandoana tsaboina afa-po ny rivotra mety ho latsaky ny 1g / kg ny rivotra maina (mitovy amin'ny ando teboka hafanana -60 Ry C). DRYAIR dehumidifiers hamonjy fampisehoana tsara dia tsara na dia miseho amin'ny tontolon'ny hamandoana ambany. Mba hihazonana ny hafanan'ny milamina ny rivotra maina, dia tokony hatao ho tony na nafanaina ny dehumidified rivotra amin'ny alalan'ny fametrahana rivotra-pana fitaovana na heater.
2.Principle ny VOC fitaovana fitsaboana:
Inona no atao hoe VOC concentrator?
VOC concentrator amim-pahombiazana dia afaka manadio sy hifantoka VOCs entana rivotra renirano reraka avy amin'ny orinasa indostrialy. Amin'ny alalan'ny fanehoana ampiarahana amin'ny fandoroana solvent sitrana na fitaovana, na miasa voalohany sy ny vola lany ny rafitra manontolo fiafarana VOC azo tanteraka mihena.
VOC fitanan'i Fanodina dia vita amin'ny taratasy toy ny toho-tantely inorganic ny substrate, izay ny Avo-Silica zeolite (molekiolan'ny sivana) no impregnated. Ny Fanodina Mizara 3 faritra toy ny dingana, desorption ary hihena ny faritra amin'ny alalan'ny rafitra casing rivotra sy ny hafanana fanoherana famehezana. Ny Fanodina dia tsy tapaka amin'ny optimum mihodina ny hafainganam-pandehan'ny fihodinan'ny iray Mitarika tsikelikely maotera.
Principal ny VOC concentrator:
Rehefa setroka mandatsa-dranomaso VOC entana mandalo amin'ny dingana faritra ny Fanodina foana izay mihodina ny, ny incombustible zeolite ao amin'ny Fanodina mifoka VOCs sy voadio mandatsa-dranomaso dia reraka ny Ambient; VOC hifantoka tanteraka anisan'ny Fanodina dia avy eo ho amin'ny desorption mihodina ny faritra, izay variana VOCs azo desorbed amin'ny avo kely ny rivotra sy ny hafanana desorption ho mifantoka amin'ny fitanana avo lenta (1 to 10 times). Avy eo, ny avo VOC mifantoka amin'y mandatsa-dranomaso dia nafindra tany tsara rafitra lahatsoratra fitsaboana toy ny incinerators na fanarenana rafitra, ny desorbed ampahany amin'ny Fanodina dia bebe kokoa ny hihena mihodina ny faritra, izay ny faritra no nampangatsiahina ny hihena entona. Ny ampahany amin'ny VOC entana setroka mandatsa-dranomaso avy amin'ny orinasa mandalo ny faritra hihena ary nafindra tany amin'ny hafanana na heater ho tezitra sy ampiasaina ho desorption rivotra.